Al Shabaab Oo Ciidamo Mareykan iyo Bangaraaf ah Ku jabisay dagaal ka dhacay deegaanka Daarusalaam
Qarax Khasaara dhaliyay oo ka dhacay xaafadda Taleex.
Tuesday March 12, 2019 - 07:11:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya deegaanka Daarusalaam ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal culus uu halkaas ku dhaxmaray ciidamo huwan ah iyo xoogaga Shabaabul Mujaahidiin.
Sawir Hore askari katirsan Bangaraafta oo deegaanka Mubaarak lagu dilay
Xalay saqdii dhexe ayay ciidamo isugu jiray Mareykan iyo Maleeshiyaadka Bangaraafta waxay isku dayeen in ay weerar qorshaysan ku qaadaan deegaanka Daarusalaam oo qiyaastii 7 KM dhanka galbeed uga beegan degmada Awdheegle.
Ciidamada huwanta soo duulayaasha ah ayaa weeraro dhabbagal ah kala kulmay xoogaga Shabaabul Mujaahidiin, dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo iyo weeraro dhabbagal ah lagu beegsaday ciidamada cadowga fagtii hore oo ay isku dayayeen in ay deegaanka galaan.
Mas'uuliyiin katirsan wilaayada Islaamiga Sh/Hoose ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada 'Mujaahidiinta' ay fashiliyeen isku daygii weerar ay cadowgu damacsanaayeen.
Saaka markii uu waagu baryay ayaa afaafka hore ee Daarusalaam lagu arkay dhiig farabadan oo larumeysanyahay in uu ka daatay ciidamadii huwanta ahaa ee weerarka soo qaaday, wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay gacanta ku dhigeen saanado hub ah oo ay ka carareen ciidamada Mareykanka iyo Maleeshiyaadka Bangaraafta ah.
Duqeyn ay diyaaradaha Drone-ka Mareykanka ka geysteen deegaanka markii dagaalku adkaaday ayaa sababtay khasaara dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah, goob joogayaal waxay sheegeen in 2 qof oo shacab ah ay dhaawacmeen balse lamasoo sheegin wax khasaara dhimasho ah oo ka dhashay duqeyntii xalay.
Sanaddii 2017 weerar sidaan oo kale uga dhacay deegaanka Daarusalaam ayay Al Shabaab ku dishay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada dowladda Mareykanka kaas oo kamid ahaa ciidamadii ka qeyb qaatay howlgalkii lagu dilay Sheekh Osama Bin Laden Hoggaamiyihii Ururka Al Qaacidda.